I-PsyOp ye-ghost yosapho (ukusebenza kwengqondo): ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa acingelayo': UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Oktobha 2019	• 9 Comments
'Intsapho ye-ghost' evela kwibali likaRuinerwold ngokuqinisekileyo iya kuyisindisa iTelgraaf imali eninzi ukuba ithengisa 'ukubhalisa kwayo'. Nangona kunjalo, ukuba uvula le 'ghost yosapho' yokungaxhamli kwimowudi ye-Google Chrome ye-Incognito, unokufunda nje i-jumble engahlawulwanga. Kutheni ujoyina iphephandaba elalixhasile ulawulo lwamaNazi kwi "40 /" 45 kwaye lisenefuthe kwi-mindset yabaninzi namhlanje? Yintoni embalwa eqondayo kukuba imithombo yeendaba kunye nezopolitiko zinokusetyenziselwa ukutyhalela phambili nomthetho ochaphazela wonke umntu ngokusebenza kwengqondo (PsyOps). Ngayiphi na imeko, unokuzibuza ukuba kutheni urhulumente enokubathintela (ukuvalela) abantu kwinkululeko yabo, okwangoku, kubonakala ngathi abenzanga nto ikhonkrithi.
Ngaba ukubulala kuye kwenziwa eRuinerwold? Ngaba zikho izidumbu ezifunyenwe egadini? Ngaba zikhona i-AK47s kwigumbi elingaphantsi? Akukho nanye kuloo nto! Linye kuphela ibali lomfana kwi-pub kwaye enye ikhona nje intelekelelo. Ungayenza njani into yokuba kubekho ukungqubana okukhulu kangaka ngokujikeleza abantu abambalwa ngegadi yemihlaba, ibali labo lonke kususela kumhla we-1 kusekwe ukuqikelela kwaye akukho lwaphulo-mthetho lukhonkrithi olwaziwayo.
Inkwenkwe eneminyaka eyi-25 ubudala isela i-bhiya ezimbalwa kwi-pub kwaye kuthiwa icela uncedo. Uncedo lantoni? Ukuba ubanjiwe yindoda? Angaya njani kwishishini lonke? Kwaye unayiphi loo ndoda kwi-notch yakhe? Ndiya kuthetha: ke ujikajikisa yonke iNetherlands ujonge phantsi malunga nebali labantu elinokuba nobomi obuncinci bodwa kunye negadi yokwabiwa, kodwa unokulindela into enjalo kumbambano wokubulala ngokulandelelana okanye kwibali likaMarc Dutroux elibandakanya abantwana abancinci. uvalelwe kwigumbi elingaphantsi. Isigculelo sokuxhatshazwa kukaRobert M. kwiziko lokukhathalela abantwana iAmsterdam lenze iintloko ezimbalwa kuneli bali libhalwe ngokucacileyo. Ukuba uva iingxelo zithetha ayikho enye into ngaphandle kokuba "asikayazi loo nto okwangoku","sisayiphanda loo nto"Kwaye"kubonakala kukho ulindelo lokuphela kwexesha","Utata kungenzeka ukuba ebe lilungu lehlelo leNyanga kangangexesha elithileMsgstr ". Ngokuyintloko kwaye badlala kuphela kwiimvakalelo zesisu, kodwa ukuba uyihlalutya ngenyathelo ngenyathelo, uya kufumanisa ukuba kukho inkululeko ethile esisiseko kwibhloko yokunqunqa.
Ayisiyonto inzima ukubeka i-PsyOp kwiminyaka yokulungiselela. Ngokuqinisekileyo ukuba usebenzisa iindawo apho ubuninzi babantu buphantsi kakhulu. Ukuba ufuna ukusebenzisa utshintsho lomthetho olunempembelelo kubantu abazizigidi ze-17 kwaye unokubeka isiseko somthetho omtsha we-EU ochaphazela abantu abazizigidi ze-500, unokufumana iindleko ezimbini iisenti kwaye ufuna ukwenza umsebenzi wokulungiselela kakuhle kunye nezinto ezenziwa ngabantu ulungelelwaniso. Ngapha koko, sinee-ANP zikaJohn de Mol ezinezifundo zakhe kunye nenketho ye deepfakes ukuvelisa iindaba ezingeyonyani.
Ngomxholo ohlawulelweyo, apho kubonakala ngathi uDe Telegraaf uqasha inani elikhulu labantu, sinokufumanisa kwimodi ye-Incognito ukuba kukho umsebenzi ocacileyo ongemva kweli bali. Ngapha koko, kukho ukubekwa amabala okukhulu okuqulethe ezi mpawu zilandelayo:
abantu abalima eyabo imifuno banamahlelo
Amadoda aneentshebe kunye neenwele ezinde anokuba yingozi (umzekelo, uMartin Vrijland)
Abantu abangafuni ukuthobela imithetho karhulumente bayingozi kubo nakwimeko yabo
Abantu abagxekayo ngamahlelo kwaye bavalela abantwana
Uninzi lweePsyOps zineempawu ezininzi, kodwa kucacile ukuba le yimibala eqaqambileyo yokuqonda kwabantu. Kubonakala ngathi abantu kufuneka balungele umthetho oza kuvumela urhulumente ukuba ajonge ngasemva kwecango ngalinye.
Izibhalo ezinje uza kufunda Ukubangaba ulilungu lephepha ndaba elingelolona ludumo lungileyo:
UJorit uyavuma ukuba abahlali beefama babenemibono eyahlukileyo. Usapho lwase-Austrian nolwaseDatshi lufumene enye ngokwembono ezithile malunga nendlela uluntu ekufuneka lujongeka ngayo. "UJosef wayeye eMelika kwaye wabona indlela enye inkampani elawula ngayo ukutya okuziinkozo. Wayecinga ukuba ayilunganga. Urhulumente kwakungekho mfuneko yokuba achonge ukuba abantu batya ntoni okanye basela ntoni. Umgubo wenzelwe imfuza ukuyigcina isemtsha. Wayengafuni nokuyitya loo nto. ”
"Wayefuna ukhathalela amanzi akhe kunye nokutya kwakhe, kuba wayecinga ukuba kunokuba neekhemikhali kuyo. Wayesela kuphela amanzi e-bhotile. Kwakukho ityhefu evela kumzi-mveliso osemoyeni. Babekholelwa ukuba kukho urhulumente oqhutywa ngamandla emva kwawo. Uthe akunangqondo ukuvota. Ngamaxesha okugqibela akazange akholelwe kude kube ngoku ndiyazi. Kodwa wayefuna ukukhusela umhlaba wakhe ukuze angadingi mntu. Wayefuna ukwenza ifama ukuba yanele.
Ukuqala, ezi ayizizo izimvo ezahlukileyo. Singamangqina kwi-Neuro Linguistic Programming (NLP) enyulu yabantu. Ukususela ngoku iindaba zosasazo nezopolitiko ziya kuthatha isigqibo sokuba yintoni 'eyahlukileyo imibono'. Ngokwenyani la manyathelo okuqala kaGeorge Orwell ukucinga ngamapolisa. Ukusukela ngoku ukuya phambili, ilizwe (ngenkqubo yemithombo yeendaba zalo) liza kumisela ukuba yintoni onokuyicinga nengakwaziyo ukukucinga. Ukusukela nini ungafumenanga ukuba enye inkampani ilawula ukuveliswa kokutya okuziinkozo kwaye iMonsanto (ngoku eyiBayer) isenza izityalo? Ukusukela nini ilihlazo lokukhulisa eyakho imifuno nokucoca amanzi? Ewe, kunjalo ngokuqinisekileyo ukususela ngoku! Ii-PsOOps zikhonza le njongo. Abantu benziwe kakhulu. Yi-NLP yomda we-mega kwaye wonke umatshini wokusasaza iindaba ngokubanzi uquka "iingcali" ezaziwayo kunye nezopolitiko ezinomsindo ziphinde zafakwa.
Abantu benziwe ngomfanekiso wokuba nabani na ocinga ngokugxekayo unokubaphika kwaye abe lihlelo. Ngapha koko, umdlalo udlalwa apha ngokudibanisa zonke iintlobo zokugxekwa 'nehlelo' lomntu kunye nomntu ophange abantwana inkululeko yabo.
Lixesha lokuba utshaye imithombo yeendaba ephambili ye-PsyOp abasasazi kunye nabapolitiki kwimigodi yabo! Banoxanduva lokubulala inkululeko yakho esisiseko ngokusebenzisa umdlalo wenkohliso nehlelo. Funda apha apha.
Ulwazi olubalulekileyo ngobomi bakho bangoku
tags: 25, ukwahlula, ixesha lokugqibela, ukucinga ngamapolisa, usapho, izimvo, ubudala, lifihla, ulwaphulo-mthetho, inyanga, iindaba ezibuxoki, izimvo, premium, URuinerwold, ihlelo, isiporho, Isiporho losapho, telegraph, ubawo, unyana
18 Oktobha 2019 kwi-08: 29
Injalo kanye njengoko uyichaza!
Eli bali liyimbali yehlabathi. Kodwa ndiyaqaphela ukuba abantu abaninzi bayifumene ilibali elingaqhelekanga, kodwa ungayi kulo nzulu.
Gcina up Martin, impembelelo inkulu kwaye iba nkulu. Ubuxoki akusekho mithetho, inyaniso ihlala iphumelela.
18 Oktobha 2019 kwi-09: 56
Into endothusayo kakhulu yindlela abantu ababona ngayo ukuba kwenzeka ntoni kwaye bangakhathazeki nokuba babelane ngamanqaku anje okanye balumkise imeko yabo .. "ngenxa yokoyika ukwaliwa." Yintoni ebaluleke kakhulu ngoku? Ngaba indalo ihlangana nokungaziqondi ngenxa yokuba ivalwe amehlo yimithombo yeendaba okanye isoyikiso sokungaphindi yenzeke?
18 Oktobha 2019 kwi-20: 23
Oku kunxulumene nokukhula kobomi bakho obuphakamileyo. Ukuba uyayiqonda indlela elisebenza ngayo eli lizwe, ke sukukhathazeka ukwala. Ukongeza, kuxhomekeke kwindlela oyizisa ngayo kunye nokuba wazi kangakanani lowo uvunayo. Uninzi lwabantu lufunda kwaye lubone yonke into kodwa ayingeni kuba bayaphupha.
Umngeni wethu omkhulu kukwenza izinto zemihla ngemihla ngononophelo kwaye ungabambisi iphepha lasekuseni kunye nezinye izithethe eziqhelekileyo kumqhubi oluzenzekelayo.
Nje ukuba le yaphukileyo ihamba ngokukhawuleza kunye nophuhliso lwe-avatar yethu.
18 Oktobha 2019 kwi-10: 37
Amapolisa atyelele i-1x kule ndlu kwangethuba kuba ecinga ukuba kungenzeka ukuba kukho isitiya sehemp, kodwa le ndoda ayizange ibavumele. (Yatsho "isithethi samapolisa" kumanejala wombono kaJeroben Pauw).
Kucacile ukuba le ngongoma kukususa loo nto: ingxaki, ukujongana, nesisombululo ... Uhlaselo
20 Oktobha 2019 kwi-00: 31
Kwelo hlelo lenkqubo yengqondo (NPO) yesandi sikaPauw esinamazwi angxolayo, apho umfundisi anokukhala ngakumbi nangakumbi
Imiphefumlo yabanengqondo egalelweyo (ababukeli beTV).
Ngomzuzu we-21, i-19 uviwo lokuwela uvavanyo (kucingelwa ukuba) luphela kwaSjoukje Drenths- Bruinsma oye wakhumbula umbhalo wakhe: "Iindlela zokulawula ezonakeleyo zazikhona, ziyaqhubeka nengqondo"
Kwaye oko kuthethiwe kwinkampani enkulu yokulawula ingqondo kwi-NL, uPauw uya kuba neentloni ngokwakho
bonke abantu abadlala idlala phaya, ungaqhubeka kangakanani, Richard Groenendijk naye ogcina umlilo uphakamileyo ngokubuza ngokungazenzisiyo (kufundiwe) kwiimvakalelo ezingezizo.
Ithiyetha ithiyetha ukubonisa zonke ii-NLérs zijongise kwicala elithile emxholweni.
URichard groenendijk umlingisi othanda ukubolekisana nenkohliso yabantu,
Isicatshulwa esineenjongo ezicingisiswe kakuhle kunye nobuchule bobuchwephesha bokusebenza kwengqondo.
Masibulele i-blogger ngohlahlelo lokuqonda, kungenjalo uya kuphinda ukhabele, i-fakex fake e-Drente.
18 Oktobha 2019 kwi-15: 33
Njengebhendi yeWelsh eyayike yacula
Ukuba uyanyanzela le nto abantwana bakho baya kuba belandelayo ..
18 Oktobha 2019 kwi-15: 48
“Ewe, kodwa uJeroben Pauw ubonakala eyindoda elungileyo ethembekileyo kum; aluxoki? Umntu onjalo akayidlali ithiyetha, akunjalo? Ayizizo zonke iindwendwe zetafile, nokuba? "
Ngubani ohlawulayo omiselweyo.
18 Oktobha 2019 kwi-16: 07
UDe Mol noPauw bayazana ngokudlula kwaye owokuqala uhlala phantsi naye etafileni. Ndikhumbula ukuba phantsi koxinzelelo oluvela kuKumkanikazi lwalusoloko luvakala kwisikhokelo-somdlalo wakhe. Andazi ukuba kunjalo, kodwa kubalulekile ..
phantse isigamu sesigidi esilahlekileyo ngaphezulu kwe-2013. Mhlawumbi loo nto inxulumene nomdla wakhe ongaphezulu kweepesenti ze-25 kwiTVBV, inkampani yokuvelisa ene-Endemol engumnikazi wepesenti ye-71. Ukulingana kwenkampani yakhe i-Pief Paf Pauw kwehle ukusuka kwi-X 4,1 yezigidi ukuya kwi-X 2,6 yezigidi
Ukwipokotho likaDe Mol (Talpa)
19 Oktobha 2019 kwi-19: 53
Kwaye iprofayile ye-facebook yolutsha. Yima 'iinyani' ezimbalwa, ezinje ngomhla wokuzalwa nomhla wokufuduka, ukuze uqiniseke. Inani lezinto eziposwe kodwa ziimvo kuphela zabantu abajonga iprofayili kuba zisezindabeni. Ithi ifoto yakhe yenziwe ngumhlobo osuka eMelika. Akukaziwa ke ukuba ibiyokwenzelwa ngubani kwaye ngubani.
« Uqhanqalazo lwamaFama: Amafama anikela ingqalelo ukuba iinkokheli zakho zoqhanqalazo azingobameli bakaRhulumente
I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2) »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.857.454
Kutheni ufuna ukwazi oku? op Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U.
guppy op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
SandinG op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
Joyina amanye ama-1.683 ababhalisile